कुनै फर्श समाप्त बिना कुनै परिमार्जनहरू पूरा छैनन्, विभिन्न प्रकार को कोटिंग बीचको सतह स्तर र केवल पूर्णताका लागि विवरणको विवरण। त्यहाँ पाइडल्सको प्रकारको ठूलो प्रकार हो। तिनीहरू निर्माणका लागि सामग्री, निर्माणको प्रकार र संलग्नको प्रकार अनुसार यी प्रकारहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो कोटिमा विभाजन छ जुन यस लेखमा हामी सम्बोधन गर्नेछौं।
फ्लोर फ्लैपको निर्माण
ढोकाको डिजाइनको दृष्टिकोणबाट हामी बिभिन्न तीन प्रकारको चयन गर्छौ। यदि दुई प्रकारको परिष्करणको फर्शमा सामेल हुन आवश्यक छ भने, एक-तह थ्रेडहोल्ड प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि कोटिंग बीचको उचाइमा कम से कम हुनेछ। सानो झण्डाको लागि उपयुक्त।
दुई-स्तरीय पैडलहरू फर्शको लागि उपयुक्त छन्, जहाँ दुई पूर्ण फरक फरक उचाइको प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, लिओनियम र टाइलको उचाइ बीचको ठूलो अंतर, जुन धुलो हुनु पर्छ र सम्भव हुने रूपमा बनाइन्छ। दुई स्तरको डिजाइनले तपाईंलाई यो गुणस्तरको गर्न अनुमति दिन्छ, बाह्य रूपमा फर्शको सत्यता संरक्षित गरिनेछ।
एङ्ग्लो फ्लो फ्लपहरू सामान्यतया चरणहरूको क्यान्सर सजाउँदा प्रयोग गरिन्छ। घरको आन्तरिक र बाहिरी सजावटको लागि प्रयोग गरिन्छ। फर्शको प्रकार सम्झन र ढोकाको चौडाइमा ध्यान दिंदा। वाइड फ्लोर सिल्सहरू विभिन्न कोटिंग्समा सामेल हुनका लागी प्रयोग गरिन्छ, अन्य मामलाहरु को लागी मिलिहरु लाई धेरै संकीर्ण हुन सक्छ।
सजावटी फ्लो फलामको सामग्री
सामग्रीको लागि, यहाँ छनौट अविश्वसनीय रूपमा महान छ, र प्रत्येक मामलाको लागि तपाईंको खोजमा समस्या छैन। यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि मूल्यले निकै बलियो रूपमा उल्ट्याउनेछ, तर सौंदर्य विशेषताहरू फरक फरक हुन्छन्।
मेटल फर्श पैड, एक नियमको रूपमा, उत्पादित इस्पात वा पीतलबाट प्रतिनिधित्व गरिन्छ। शीर्ष मा, धातु एक फिलिम संग कवर गरिएको छ जो पैडिंग को उपस्थिति मा सुधार गर्दछ र साथै अतिरिक्त स्थायित्व दिन सक्छ। एकदम प्रभावशाली जीवन संग, धातु फर्श पैड को मूल्य सबै भन्दा कम छ।
साथै, हामी एल्यूमिनियम फर्श पैडलाई हाइलाइट गर्दछौं। धातु मोडेलहरू बीच तिनीहरू सबैभन्दा टाढा र टिकाऊ छन्। एल्युमीनियम फर्श पैडहरू राम्रो छन् कि तिनीहरूले आफैलाई जंगमा उधारो गर्दैनन्, उनीहरूले अधिकतम दैनिक भारहरूको सामना गर्न सक्छन्। डिजाइन को मामला मा, तपाईं मानक सुन, चांदी को रंग मा भरोसा गर्न सक्छन्। यदि चाहियो भने, तपाईं आफैले एक संगमरमर खत्म, प्राकृतिक काठ को चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
लचीला रबर फर्श पैड दुई प्रकारका छन्। त्यहाँ रबड सम्मिलित भएको एल्युमीनियम संरचना हो, र त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा लचीला रबड ढाँचाहरू छन्। स्थापना पनि दुई प्रकारको हुन सक्छ: गोंद वा डाउल्ससँग छिटो हुन्छ।
राम्रो कुशलता गुणहरूले कागको बोममा घमन्ड गर्न सक्छ। यो एक घडी माथिल्लो भाग भएको एक किल्ला हो जुन थोपा वसन्त देखिन्छ। यो एक कोटिंग बाट अर्को सुचारु संक्रमण दिने अर्को भनिने क्षतिपूर्ति विकल्प हो।
प्लास्टिक फर्श टाइल टुक्रा टुक्रा , लिओनम र कालीनमा सामेल हुन क्लासिक समाधान हो। साथै धेरै लचीला निर्माण, जो घुमावदार जंक्शनहरूसँग काम गर्ने अनुमति दिन्छ। प्लास्टिक राम्रो छ किनकी यो कुनै पनि छाया र बनावट प्राप्त गर्न सजिलो छ जुन फ्लोर डिजाईनको उत्तम सूट हुन्छ।
फ्लोर फ्लाप फिक्स गर्ने विधि
बिल्डरको शस्त्रागारमा स्थापनाको लागि, त्यहाँ दुवै ग्लुको मिश्रण र आवश्यक फास्टनरहरू छन्। उल्टिएको खुला ब्वाईनिंगले पछिको मास्किंग गर्दैन। यो आत्म-ट्यापिंग शिकंजाको बारेमा हो, जुन टोनमा चित्रित हुन्छ। तिनीहरू माथिबाट केहि पनि कवर गर्दैनन्।
यदि हामी लुकेको एन्कोरेज बारे कुरा गर्छौं भने, यहाँ एक मौलिक फरक दृष्टिकोण हो। पहिलो फिक्सिंग अखरोट ठीक गर्नुहोस्, जसमा शीर्ष लिच रोड स्न्याप हुनेछ। यस अवस्थामा, फास्टनरको उचाई फर्शको उचाईसँग मेल खान्छ।
एक कोठा कोठामा आन्तरिक
धुलाईको लागि सिङ्क
सेतो पाक बोर्ड
एक घर संग एक घर - एक घर को घर को लागि सबै भन्दा राम्रो विचार र समाधान
भान्साको लागि बार तालिका
स्नानघरमा टाइल कसरी राख्नुहुन्छ?
आंतरिक सजावट को लागि सजावटी पैनलों
Provence को शैली मा फर्नीचर को Decoupage
आन्तरिक शैलीहरू के हो?
तरल वालपेपर के हो?
अपार्टमेंट मा छत को प्रकार
खुट्टा र पोपमा सेल्युलाइट - कसरी छुटकारा पाउनु हुन्छ?
बुना भयो स्विमवियर 2013
Epiphany जनवरी 19मा भक्ति - जनवरी 18 देखि 1 जनवरी 1 सम्म एपिफनी क्रिसमस हव मा कस्तो भाग्य खर्च गरिन्छ?
कोट कुकीजबाट केक बिना
उमा थरमन र क्वेन्टिन टारारिनो
छोटो स्कर्ट - सबै भन्दा फैशनेबल मोडेलको तस्बिरहरूको चयन
म्याडोनाले श्रृंगार बिना उनको अनुहार देखाए
बच्चाहरु के केक बिना चिसो
ब्राड पिट एन्जिलिना जोलीको छोराछोरीको लागि लड्न इन्कार गरे
आन्तरिक शैलीमा आन्तरिक शैली
हेइडी क्लम शेयरले आफ्नो पृष्ठमा पछाडि फोटोहरूको एक पूरा श्रृंखला साझेदारी गर्दछ
घंटी मिर्च र बीफ संग "प्राग" सलाद
वेटिकन को संग्रहालय
जिब्रोको तल हुड
अंतरंग क्षेत्र को डिपोलन
सबै अवसरको लागि माथि र स्कर्ट - विश्वव्यापी किट
Motoblock को लागी उपकरण
एक बीडा कलर संग ड्रेस गर्नुहोस्
हरी कफी कसरी पिउने?